बुटवल कोरोना अस्पतालका आइसियु बेड भरिँदै – Health Post Nepal
बुटवल कोरोना अस्पतालका आइसियु बेड भरिँदै
२०७७ भदौ २ गते २०:२४
बुटवलको धागो कारखानामा रहेको कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पतालमा संक्रमित भर्ना हुने क्रम तीव्र रूपले बढेको छ ।
अस्पतालकोे सघन उपचार कक्ष (आइसियू) भरिएपछि बेडहरू थप गरिएको छ।
कोरोना अस्पतालमा आइसियूमा ८ बेड रहेकामा अहिले १० बेड थपेर १८ पुर्याइएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका कोरोना फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले जानकारी दिएका छन्।
अहिले कोरोना अस्पतालको आइसियू कक्षमा १२ जना बिरामी उपचाररत छन् । यही अवस्थामा बिरामीको संख्या दैनिक थपिए बुटवलमा कोरोनाका बिरामीका लागि आइसियू बेड कम हुने देखिएको छ।
कोरोना अस्पतालको आइसियुमा केही दिनदेखि दैनिक २–३ जना बिरामी थपिने गरेका छन् । यही गतिमा आइसियूमा बिरामी थपिँदै गएमा बेडको संख्या कम हुने उनले बताए।
डा. थापाका अनुसार अस्पतालमा ६ वटा भेन्टिलेटर छ । अहिलेसम्म भर्ना भएका कोरोनाका बिरामीमध्ये ६ जनालाई भेन्टिलेटर प्रयोग गरिएको थियो।
‘गम्भीर लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमितलाई छिट्टै बेड अभाव हुने देखिन्छ । यही गतिले संक्रमित बढ्यो भने एक हप्ताभित्रै बेडको अभाव हुन सक्छ,’ डा थापाले भने ।
कोरोना अस्पतालको आइसोलेसनतर्फ पनि बिरामी संख्या थपिने क्रम जारी छ । ३६ बेडको आइसोलेसन कक्षमा २१ जना भर्ना भएर बसेका छन्।
‘पछिल्लो समय कोरोनाका लक्षणसहित बिरामीको संख्या बढिरहेको डा. थापाले बताए । अहिले लक्षण देखिएका बिरामीमा भर्ना भएका छन्,’ डा. थापाले भने, ‘उहाँहरूमा रुखाघोकी र टाउको दुख्नेजस्ता लक्षण छन्।’
बुटवलमा लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई सामुदायिक आइसोलेसन र होम आइसोलेसनमा राख्ने गरिएको छ। उनका अनुसार सामान्य लक्षण देखिएका कोरोनाका बिरामीलाई कोरोना अस्पतालको आइसोलेसनमै राख्ने गरिएको छ। तर तत्काल थप उपचार गर्नुपर्ने गम्भीर प्रकृतिको लक्षण देखिएकालाई आइसियूमा भर्ना गर्ने गरिएको छ।
अस्पतालका अनुसार बुटवलको कोरोना अस्पतालमा आइसियूमा रहेका अधिकांश बिरामी कपिलवस्तुका हुन् । बाँकी रूपन्देही, पाल्पा, पश्चिम नवलपरासी र दाङका छन् । ‘आइसियूमा रहेकामा खोकी, ज्वरो, श्वास फेर्न गाह्रो हुने समस्या देखिएको छ। कडा खालको निमोनिया पनि देखिएको छ, एकजना त आज भेन्टिलेटरमै छन्,’ डा. थापाले थपे। बुटवलको विशेष कारोना अस्पतालको सञ्चालन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले गरिरहेको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसँगै प्रदेश ५ मा हाल कोरोना भाइरसका संक्रमितको उपचारका लागि भैरहवाको भीम अस्पताल भैरहवा, दाङ बेलझुण्डीमा रहेको कोरोना अस्पताल र बाँकेको खजुरा अस्पताल छन्। भीम अस्पतालले कोरोना संक्रमित बिरामी सबैलाई डिस्चार्ज गरेपछि अस्पतालले पुनः नियमित सेवा सुरु गरिसकेको छ। त्यहाँ कोरोनाका बिरामी भर्ना छैनन्।